UBiden ubuyise imiyalo ephezulu kaTrump yokuvimbela iTikTok - ngabe lokhu kungaba yizindaba ezinhle kuHuawei? | Kusuka kuLinux
Muva nje kuvele izindaba zokuthi umengameli UJoe Biden usayine isigungu esiphezulu esichitha ukuvinjelwa kukaTrump kuTikTok nakuWeChat.
Esikhundleni se-oda likaTrump, UJoe Biden uyalela uNobhala Wezohwebo ukuthi aphenye izicelo ezinamatayiti ezimbangi zangaphandle lokho kungabeka ubungozi kwimininingwane yedatha noma ukuphepha kwezwe laseMelika.
Ukulawulwa okuphezulu kukaBiden ihlose ukubeka 'uhlaka lwesinqumo olususelwa kunqubo' kuhlelwe kakhudlwana kokuvinjelwa okungenzeka. Lokhu okwakamuva ochungechungeni lwezinyathelo ezihlobene neChina ezathathwa nguJoe Biden ngaphambi kohambo lwakhe lokuqala oluya e-Europe, lapho ukunciphisa ukuhlukunyezwa kweBeijing kuzoba yinto esemqoka ku-ajenda yemihlangano nabaholi be-G7 ne-NATO.
Ngonyaka odlule, uDonald Trump wathi izinhlelo zokusebenza zezinkampani zaseChina "zisongela ukuphepha kwezwe, inqubomgomo yezangaphandle kanye nomnotho wase-United States."
AbakwaTikTok neqembu labasebenzisi be-WeChat baseMelika bamangalele uTrump ngalesi sinqumo futhi izinkantolo zavimbela lokho kuvinjelwa, nangaphansi kwengcindezi yabaphathi bakaTrump, i-ByteDance yazama ukuthengisa ingxenye yeTikTok, kodwa abaphathi beBiden bakumisa ukuthengiswa ngoFebhuwari.
I-oda eliphezulu elisayiniwe lingena esikhundleni sohlu lwama-oda aphezulu akhishwe nguMongameli Trump nyakenye avimba izinhlelo zokusebenza ezinjengeTikTok, WeChat ne-Alipay ezitolo zezinhlelo zokusebenza zase-US.
“Abaphathi bazibophezele ekukhuthazeni i-Inthanethi evulekile, esebenzisanayo, enokwethenjelwa nevikelekile, ivikele amalungelo abantu ku-inthanethi naku-inthanethi, futhi ixhase umnotho wedijithali osebenzayo. Inselelo esibhekene nayo ngalesi sinqumo ukuthi amanye amazwe, kubandakanya neChina, awahlanganyeli ngalezi zibophezelo noma lezi zimiso kunalokho alwela ukusebenzisa idatha yaseMelika kanye nobuchwepheshe bedijithali ngendlela ebeka ubungozi obungamukeleki ekuphepheni kwezwe. "Kusho isikhulu esiphezulu. ekuphathweni kweBiden
I-oda elisha likaJoe Biden lizocela uMnyango Wezohwebo ukuthi ubuyekeze izicelo ezihlobene nezitha zakwamanye amazwe bese uchaza okufanele uyithathe "njengengozi engamukeleki," ngokusho kombiko wangemuva we-White House.
Lokhu kuzobandakanya ukuthengiselana okubandakanya izinhlelo eziphethwe noma ezilawulwa "ngabantu abasekela ezempi noma imisebenzi yezobunhloli yesitha sangaphandle, ababandakanyeka emisebenzini enonya ye-cyber, noma abaqoqa imininingwane eyimfihlo."
Ngenkathi iKomidi Lokutshalwa Kwezimali Zakwamanye Amazwe e-United States, i-CFIUS, libuyekeza ukuhlangana noma utshalomali lwangaphandle, i-oda ephezulu icaphuna isilinganiso sangaphambilini sikaTrump esichaza ukuthengiselana kabanzi ukufaka ukufakwa noma ukudluliswa okubandakanya insizakalo yezobuchwepheshe yezokuxhumana.
Ukuphathwa UBiden uqhubeka nokudalula ukuthi indlela yakhe eqinile eChina izohluka kanjani kwekaTrump., ukusebenzisa izinqubomgomo ezinolaka izikhulu ezithi zihambisana kakhulu nezindinganiso zaseMelika.
UJames Lewis, iphini likamongameli omkhulu weCentre for Strategic and International Study, uthe abaphathi beBiden abakhonjiswanga ukuthambisa isimo esinzima sikahulumeni ngeChina. Kepha isimemezelo esisha sisungula izindlela eziqonde kakhulu zokuhlola ubungozi obudalwe yiTikTok nezinye izinkampani ezingabaphikisi bakwamanye amazwe njengeChina.
Imiyalo kaTrump yangaphambilini yayihlose ukuvimbela uhlelo lokusebenza oludumile lokwabelana ngamavidiyo iTikTok kanye nohlelo lokusebenza lwemiyalezo i-WeChat e-United States. Lokhu kuvinjelwa kuvinjelwe okwesikhashana yizinkantolo ngoba ukukhathazeka kwezokuphepha kuzwelonke okuphakanyiswe ngabaphathi bakaTrump babenjalo kakhulu kakhulu okucatshangelwayo noma okungacaci kakhulu.
Futhi abaphathi beBiden babheke ukwenza inqubo engcono yokukhomba nokubhala phansi ukukhathazeka kwezokuphepha kuzwelonke ukuze ukuvinjelwa kokudluliswa kwedatha okungahle kumelane nezinselelo zomthetho.
I-oda elisha yisinyathelo sakamuva nje sabaphathi bakwaBiden ukubhekana nezinselelo ezibangelwe yiChina. Ngesonto eledlule, uJoe Biden usayine elinye i-executive oda elenza ukuvinjelwa kwenkathi kaTrump ekutshalweni kwezimali kwaseMelika ezinkampanini zaseChina ngezinsolo zokuxhumana namasosha aseChina. Isimemezelo sibala izinkampani ezingama-59 ezingavunyelwe ukutshala imali, kufaka phakathi lezo ezakha futhi zisebenzise ubuchwepheshe bokuqapha obusetshenziselwa ukulwa namaSulumane amancane nabaphikisana nohulumeni eHong Kong.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » UBiden ubuyise imiyalo ephezulu kaTrump yokuvimbela iTikTok - ngabe lokhu kungaba yizindaba ezinhle kuHuawei?
I-MX Mate: Isilingo Esincane seLinux - Running Mate ku-MX Linux